पत्रुसले येशूसँग बिताएको समयमा उनले येशूमा धेरै असल गुणहरू देखे, धेरै पक्षहरू अनुकरण गर्न लायकका थिए, र धेरै पक्षहरू जुनले उनलाई समर्थन गरे। पत्रुसले येशूमा धेरै तरिकाबाट परमेश्‍वर उहाँसँग हुनुभएको देखेको भए तापनि, र उनले धेरै असल गुणहरू देखेको भए तापनि, उनले शुरुमा येशूलाई चिनेका थिएनन्। पत्रुस २० वर्षको हुँदा उनले येशूलाई पछ्याउन थालेका थिए, र उनले ६ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा उहाँलाई पछ्याए। त्यो समय अवधिमा, उनले येशूलाई कहिल्यै पनि चिनेका थिएनन्; पत्रुसले उहाँप्रतिको आदरभावको कारणले गर्दा येशूलाई पछ्याउन तयार भएका थिए। जब येशूले उनलाई पहिलो पल्ट गालील समुद्रको किनारमा हुँदा बोलाउनुभयो, तब उहाँले तिनलाई सोध्नुभयोः सिमोन बारजोना, “के तँ मेरो पछि लाग्छस्?” तब पत्रुसले भने, “स्वर्गीय पिताले पठाउनुभएको व्यक्तिलाई मैले पछ्याउनु पर्छ। पवित्र आत्माले चुन्नुभएको व्यक्तिलाई मैले चिन्नैपर्छ। म तपाईको पछि लाग्नेछु।” त्यस बेलासम्म पत्रुसले येशू नाउँ गरेको मानिस—अगमवक्ताहरूमध्येको सबैभन्दा महान् व्यक्ति र परमेश्‍वरका पुत्रको बारेमा सुनिसकेका थिए—र पत्रुसले उहाँलाई निरन्तर रूपमा खोजिरहेका थिए र उहाँलाई भेट्ने मौकाको आशा गरिरहेका थिए (किनकि यसरी नै उनलाई पवित्र आत्माले डोर्याइरहनुभएको थियो)। यो भन्दा अगाडि पत्रुसले उहाँलाई कहिल्यै नदेखेको र उहाँको बारेमा चर्चा गरिएको सुनेको मात्रै भएता पनि, विस्तारै-विस्तारै उनको हृदयमा येशूको निम्ति एक किसिमको तृष्णा र भक्ति जाग्दै थियो, र येशूलाई एक-दिन त पक्कै भेट्ने नै छु भनेर उनले तृषित भई उहाँको बाटो हेरिरहेका थिए। अनि येशूले पत्रुसलाई कसरी बोलाउनुभयो त? उहाँले पनि यो पत्रुस नाउँ गरेको मानिसको बारेमा सुन्नुभएको थियो, तैपनि उहाँलाई यसरी निर्देशन दिनुहुने पवित्र आत्मा हुनुहुन्‍नथियो: “गालील समुद्रमा गएर, सिमोन बारजोना नाउँ गरेको एउटा मानिसलाई भेट्नु।” येशूले पनि त्यहाँ एउटा बारजोना नाउँ गरेको मानिस छ, र उनले पनि येशूले स्वर्गको राज्यको सुसमाचार प्रचार गरिरहनुभएको छ, र मानिसहरूले उहाँका कुराहरू सुनेका छन्, र उहाँको प्रचारलाई सुनेर धेरै मानिसहरू रोएका छन् भन्ने कुरा सुनेका थिए भनेर कसैले भनेको सुन्नुभएको थियो। यो कुरा सुनेर येशूले यो मानिसलाई गालील समुद्रसम्म पछ्याउनुभएको थियो; जब पत्रुसले येशूको बोलावटलाई ग्रहण गरे, तब उनले उहाँलाई पछ्याए।
पत्रुस एक विवेकी मानिस थिए, जो प्राकृतिक बुद्धिको साथ जन्मेका थिए, र पनि उनले येशूको पछि लाग्दा धेरै मूर्ख कामहरू गरे। शुरुमा उनले येशूको बारेमा केही धारणाहरू राखेका थिए। उनले सोधेः “मानिसहरूले तपाईलाई भविश्यवक्ता भनेर भन्दछन्, त्यसोभए, जब तपाई आठ वर्षको हुनुहुन्थ्यो, र कुरा बुझ्न थाल्नुभयो, के तपाई परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा थियो? के तपाई पवित्र आत्माद्धारा गर्भधारण हुनुभएको थियो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा थियो?” येशूले जवाफ दिनुभयोः “होइन, मलाई थाहा थिएन। के म तेरो लागि सामान्य मानिसजस्तो देखिदिँन त? म अरु मानिसहरू जस्तै हुँ। पिताले पठाउनु्भएको व्यक्ति सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य व्यक्ति होइन। अनि मैले गरेका कामले मेरा स्वर्गीय पिताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, र मेरो प्रतिरूपले म जो हुँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दछ, अनि मेरो शारीरिक भौतिक शरीरले मेरा स्वर्गीय पिताको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपले गर्न सक्दैन—केवल उहाँको एउटा भागलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। म आत्माबाट आएको भएता पनि, म अझै एउटा सामान्य व्यक्ति हुँ र मेरा पिताले मलाई एउटा सामान्य व्यक्तिको रूपमा यस पृथ्वीमा पठाउनुभएको हो, असाधारण व्यक्तिको रूपमा होइन।” पत्रुसले जब यो कुरा सुने, तब मात्र उनले येशूको बारेमा थोरै भए पनि कुरा बुझे। अनि येशूको काममा उहाँसँग विताएका अनगिन्ती घण्टाहरू, उहाँका शिक्षाहरू, उहाँले गोठालाको रूपमा गर्नुभएको कामलाई देखेर र उहाँले गर्नुभएको हेरचाहको कामलाई देखेपछि मात्रै उनले अझ गहिरो रूपमा उहाँको बारेमा बुझे। जब येशू ३० वर्षको हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला उहाँले पत्रुसलाई उहाँको आउँदै गरेको क्रुसको बारेमा बताउनुभयो र सबै मानिसजातिलाई छुट्कारा दिन—उहाँले एउटा चरणको काम अर्थात क्रुसको काम गर्न आउनुभएको थियो भनेर बताउनुभयो। येशूले पत्रुसलाई यो पनि भन्नुभयो कि क्रुसमा टाँगिएको तीन दिन पछि, मानिसको पुत्र फेरि बौरी उठ्नेछ, र उहाँ ४० दिनसम्म मानिसहरूको सामु देखा पर्नुहुनेछ। यी वचनहरू सुनिसकेपछि पत्रुस असाध्यै दुःखित भए र उनले यी वचनहरू आफ्नो हृदयमा लिए; त्यसबेलादेखि उनी अझ येशूको नजिक भए। केही समय अनुभव गरिसकेपछि, येशूले गर्नुभएको सबै कुरा परमेश्‍वरकै हो, र येशू असाधारण किसिमको प्रेमिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले बुझे। जब उनले यो कुरा बुझे, तब मात्र पवित्र आत्माले उनलाई भित्रबाट ज्योति दिनुभयो। त्यसपछि येशूले आफ्ना चेलाहरू र अरु अनुयायीहरूतर्फ फर्केर सोध्नुभयोः “यूहन्ना तँ मलाई को हुँ भनेर भन्छस्?” यूहन्नाले जवाफ दिएः “तपाई मोशा हुनुहुन्छ।” त्यसपछि उहाँ लूकातिर फर्कनुभयोः “अनि तँ, लूका, तँचाहिँ मलाई म को हुँ भनेर भन्छस् त?” लूकाले जवाफ दिएः “तपाई अगमवक्ताहरूमध्येको सबैभन्दा महान व्यक्ति हुनुहुन्छ।” त्यसपछि उहाँले एकजना बहिनीलाई सोध्नुभयो, र तिनले जवाफ दिइन्ः “तपाई अनन्तदेखि अनन्तसम्म धेरै वचन बोल्नुहुने अगमवक्ता हुनुहुन्छ। कसैका भविष्यवाणीहरू तपाईका झैं महान छैनन्, न तपाईका ज्ञानहरूभन्दा बढि कसैको ज्ञान नै छ; तपाई भविश्यवक्ता हुनुहुन्छ।” तब येशूले पत्रुसतिर फर्केर सोध्नुभयोः “ए पत्रुस, तँ मलाई म को हुँ भनेर भन्छस्?” पत्रुसले जवाफ दिएः “तपाई जीवित परमेश्‍वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाई स्वर्गबाट आउनुभएको हो। तपाई यस पृथ्वीको हुनुहुन्न, तपाई परमेश्‍वरले सृष्टि गर्नुभएका अरु चिजहरूजस्तो हुनुहुन्न। हामी यस पृथ्वीका हौं, र तपाई यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, तर तपाई स्वर्गको हुनुहुन्छ, र तपाई यस संसारको हुनुहुन्न, र तपाई यस पृथ्वीको पनि होइन।” उनको अनुभवले गर्दा पवित्र आत्माले उनलाई ज्योति दिनुभयो जसले गर्दा उनलाई यो कुरा बुझ्न सक्षम बनाईदियो। ज्ञानको यो ज्योति पाइसकेपछि, उनले येशूले गर्नुभएका हरेक कुराको अझ धेरै प्रशंसा गरे, उनले उहाँको प्रेमलाई झन बढी प्रेमिलो मान्ने भए, र उनी उहाँसँग सधैं अलग्गिन हिचकिचाउने भए। तसर्थ, क्रुसमा टाँगिएर, पुनरुत्थान भएपछि सबैभन्दा पहिले येशूले आफुलाई पत्रुसको सामु प्रकट गर्नुभयो, त्यसपछि पत्रुसले असाधारण खुशीका साथ कराएर भनेः “प्रभु! तपाई बौरी उठ्नुभयो!” त्यसपछि, पत्रुसले रुँदै-रुँदै एउटा अति ठूलो माछा समातेर पकाए र येशूको सेवा गरे। येशू मुस्कुराउनुभयो, तर बोल्नुभएन। येशूको पुनरुत्थान भएको थियो भनेर पत्रुसलाई थाहा थियो तापनि उनले यसको रहस्यलाई बुझेका थिएनन्। जब उनले येशूलाई माछा खान दिए, तब येशूले त्यसलाई इन्कार गर्नुभएन, तर उहाँ बोल्नुभएन वा खान बस्नुभएन। बरु उहाँ त अचानक हराउनु पो भयो। यस कुराले पत्रुसलाई ठूलो चोट लागेको थियो, र उनले पुनरुत्थान हुनुभन्दा पहिलेको येशू र पुनरुत्थान भइसकेपछिको येशूमा फरक थियो भनेर त्यसपछि मात्र बुझे। एकपल्ट उनले यो महशुस गरिसकेपछि पत्रुस दुःखि भए, तर प्रभुले आफ्नो काम पूरा गरिसक्नुभएको छ भन्ने कुराले उनलाई सान्त्वना दियो। येशूले आफ्नो काम पूरा गरिसक्नुभएको छ, उहाँको मानिसहरूसँग बस्नुपर्ने समय सिद्धिएको छ र अबदेखि उसो मानिस आफ्नो बाटोमा हिँड्नु पर्नेछ भन्ने उनलाई थाहा भयो। येशूले एकपल्ट उनलाई भन्नुभएको थियोः “तैँले पनि मैले पिएको कचौराबाट पिउनैपर्छ (उहाँको पुनरुत्थानपछि उहाँले यही कुरो भन्नुभएको थियो)। तँ पनि मैले हिँडेको मार्गमा हिँड्नैपर्छ। तैँले मेरो लागि जीवन दिनुपर्नेछ।” अहिले जस्तो त्यस समयमा आमनेसामने भएर कुाराकानी हुँदैनथ्यो। अनुग्रहको समय अवधिमा, पवित्र आत्माको काम विशेष गरेर लुकेको अवस्थामा थियो, र पत्रुसले धेरै कष्टहरू भोग्नु परेको थियो। कहिलेकाहीँ पत्रुस यस्तो उद्गार व्यक्त गर्न पुग्थेः “हे परमेश्‍वर! मसँग यो जीवनदेखि बाहेक अरु केही छैन। यद्यपी यो तपाईको लागि त्यति मूल्यवान छैन, म यो तपाईलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। यद्यपी मानिसहरू तपाईलाई प्रेम गर्न अयोग्य छन्, र उनीहरूका हृदय र प्रेम मूल्यहिन छन्, तपाईलाई मानिसहरूको हृदयको विचार थाहा छ भनी म विश्‍वास गर्दछु। मानिसहरूका शरीरले तपाईको स्वीकारलाई पूरा नगरेता पनि, तपाईले मेरो हृदयलाई स्वीकार गरिदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु।” उनले यसरी प्रार्थना गर्दा यस किसिमको प्रार्थनाले उनलाई हौसला दिन्थ्योः “म मेरो सम्पूर्ण हृदय परमेश्‍वरलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। म परमेश्‍वरको लागि कुनै कुरा गर्न असक्षम भएता पनि, सम्पूर्ण हृदयले म आफैंलाई उहाँकहाँ समर्पित गर्न चाहन्छु र परमेश्‍वरलाई भक्तिका साथ सन्तुष्ट तुल्याउन चाहन्छु। परमेश्‍वर मेरो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्‍वास गर्दछु।” उनले भनेः “मैले मेरो जीवनमा केही पनि मागेको छैन तर परमेश्‍वरको लागि मेरा सोचाइहरू र मेरो हृदयको चाहना उहाँबाट स्वीकार भएका होऊन् भन्ने म चाहन्छु। म लामो समयदेखि प्रभु येशूसँगै थिएँ, तर पनि मैले उहाँलाई कहिल्यै प्रेम गरिनँ; त्यो नै मेरो सबैभन्दा ठूलो ऋण थियो। म उहाँसँगै थिएँ, तापनि म उहाँलाई चिन्दिनँथिएँ र मैले उहाँको पछाडि अनुपयुक्त कुरा समेत गरेको थिएँ। यी कुराहरू सोच्दा मलाई प्रभु येशूप्रति झन धेरै ऋणी भएको महशुस हुन्छ।” उनले सधैं यस तरिकाले प्रार्थना गर्थे। उनले भनेः “म धुलोभन्दा पनि कम छु। मैले यस वफादार हृदयलाई परमेश्‍वरमा समर्पित गर्नु बाहेक म केही गर्न सक्दिनँ।”
पत्रुसका अनुभवहरूमा चरम विन्दु आयो, जुन बेला तिनको शरीर लगभग पूर्ण रूपमा तोडिएको थियो, तर अझै पनि येशूले तिनलाई भित्रैबाट प्रोत्साहन दिनुभयो। अनि एक पटक, येशू पत्रुसकहाँ देखा पर्नुभयो। पत्रुस अत्यन्तै कष्टमा भएको बेलामा र तिनले आफ्‍नो हृदय तोडिएको अनुभव गरेको बेलामा, येशूले तिनलाई निर्देशन दिनुभयो: “पृथ्वीमा तँ मसँग थिइस्, र म तँसँग यहाँ थिएँ। तर पहिले हामी स्वर्गमा एकसाथ भएको भए पनि, आखिर यो आत्मिक संसारको कुरा थियो। अब म आत्मिक संसारमा फर्केको छु, र तँ पृथ्वीमा छस्, किनभने म पृथ्वीको होइन, र तँ पनि पृथ्वीको नभए तापनि, तैँले पृथ्वीमा आफ्‍नो काम पूरा गर्नुपर्छ। तँ एक सेवक भएको हुनाले, तैँले आफ्‍नो कर्तव्यलाई पूरा गर्नैपर्छ।” तिनी परमेश्‍वरको पक्षमा फर्कन सक्‍छन् भन्‍ने सुनेपछि यसले पत्रुसलाई सान्त्वना दियो। आफू यति धेरै वेदनामा थिए कि लगभग तिनी ओछ्यानग्रस्त थिए; तिनलाई यति हदसम्‍म ग्‍लानि महसुस भयो कि तिनले भने: “म यति भ्रष्ट छु कि म परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन असक्षम छु।” येशू तिनीकहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्‍नुभयो: “पत्रुस, के यस्तो हुन सक्छ कि तैँले एक पटक मेरो अगाडि गरेको संकल्पलाई बिर्सेका छस्? के मैले भनेका सबै कुरा तैँले साँच्‍चै बिर्सेको छस? के तैँले मसँग गरेको संकल्पलाई बिर्सेको छस्?” यो येशू नै हुनुहुन्छ भन्‍ने देखेपछि, पत्रुस आफ्‍नो ओछ्यानबाट उठे, र येशूले तिनलाई सान्त्वना दिनुभयो: “म पृथ्वीको होइन, मैले तँलाई पहिले नै भनिसकेँ—तैँले यो कुरालाई बुझ्‍नैपर्छ, तर के मैले तँलाई बताएको अर्को कुनै कुरा बिर्सेको छस्? ‘तँ पनि पृथ्वीको होइनस्, संसारको होइनस्।’ अहिले, तैँले गर्नुपर्ने काम छ। तँ यसरी दुःखी हुनु हुँदैन। तैँले यसरी कष्ट भोग्‍नु हुँदैन। मानिसहरू र परमेश्‍वर एउटै संसारमा सह-अस्तित्वमा रहन नसके तापनि, मेरो आफ्‍नै काम छ र तेरो पनि आफ्‍नै काम छ, अनि एक दिन तेरो काम पूरा भएपछि, हामी एउटै संसारमा एकसाथ हुनेछौं, र म तँलाई सदासर्वदा मसँग रहनको लागि अगुवाइ गर्नेछु।” यी वचनहरू सुनिसकेपछि, पत्रुसलाई सान्त्वना मिल्यो र तिनी ढुक्क भए। यो कष्ट तिनले सामना गर्नुपर्ने र अनुभव गर्नुपर्ने कुरा थियो भन्‍ने कुरा तिनलाई थाहा थियो, र त्यसपछि, तिनी उत्प्रेरित भए। तिनलाई विशेष अन्तर्दृष्टि र मार्गनिर्देशन दिँदै येशू तिनीकहाँ तिनको हरेक महत्त्वपूर्ण क्षणमा देखा पर्नुभयो, र उहाँले तिनीमाथि धेरै काम गर्नुभयो। अनि पत्रुसले सबैभन्दा बढी के कुराको पछुतो गरे? पत्रुसले “तपाईं जीवित परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ” भनेर भनेको केही समयपछि नै, येशूले पत्रुसलाई अर्को प्रश्‍न गर्नुभयो (यद्यपि यसको बारेमा बाइबलमा यसरी विवरण दिइएको छैन)। येशूले तिनलाई सोध्‍नुभयो: “पत्रुस! के तैँले मलाई कहिल्यै प्रेम गरेको छस्?” उहाँले के भन्‍न खोज्‍नुभएको हो सो पत्रुसले बुझे, र भने: “प्रभु! मैले स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई एक पटक प्रेम गरेको थिएँ, तर मैले तपाईंलाई कहिल्यै प्रेम गरेको छैन भन्‍ने कुरालाई म स्वीकार गर्छु।” त्यसपछि येशूले भन्‍नुभयो: “यदि मानिसहरूले स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई प्रेम गर्दैनन् भने, तिनीहरूले पृथ्वीमा हुने पुत्रलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छन्? र यदि परमेश्‍वर पिताले पठाउनुभएका पुत्रलाई मानिसहरूले प्रेम गर्दैनन् भने, तिनीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई कसरी प्रेम गर्न सक्छन्? यदि मानिसहरूले पृथ्वीमा हुने पुत्रलाई साँच्‍चै प्रेम गर्छन् भने, तिनीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई साँचो रूपमा प्रेम गर्छन्।” जब पत्रुसले यी वचनहरू सुने, तब तिनले आफूमा के कमी छ भन्‍ने कुरालाई महसुस गरे। “मैले स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई एक पटक प्रेम गरेको थिएँ, तर मैले तपाईंलाई कहिल्यै प्रेम गरेको छैन” भन्‍ने आफ्‍नो वचनहरूप्रति तिनी सँधै यति हदसम्‍म पछुताउँथे कि तिनले आँसु नै झार्थे। येशूको पुनर्जागरण र स्वर्ग आरोहणपछि, तिनले यी वचनहरूप्रति अझै ग्‍लानि र शोक महसुस गरे। आफ्‍नो विगतको कार्य र आफ्‍नो वर्तमानको कदको बारेमा स्मरण गर्दै, तिनी धेरै पटक प्रार्थनामा येशूको सामने जान्थे, परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूरा गर्न नसकेको र परमेश्‍वरको मापदण्डहरू अनुसार हुन नसकेको कारण सँधै अफसोस र ऋणी महसुस गरिरहन्थे। यी समस्याहरू तिनको लागि सबैभन्दा ठूलो भारी बन्यो। तिनले भने: “एक दिन मसँग भएको सबै कुरा र म जे छु सबै कुरा तपाईंमा समर्पित गर्नेछु, र जे बहुमूल्य छ म तपाईंलाई त्यही दिनेछु।” तिनले भने: “परमेश्‍वर! मेरो एउटै मात्र विश्‍वास छ र एउटै मात्र प्रेम छ। मेरो जीवनको केही मूल्य छैन, र मेरो शरीरको केही मूल्य छैन। मेरो एउटै मात्र विश्‍वास छ र एउटै मात्र प्रेम छ। मेरो मनमा तपाईंप्रति विश्‍वास छ र मेरो हृदयमा तपाईंप्रति प्रेम छ; तपाईंलाई दिनका लागि मसँग यी दुई कुराहरू मात्रै छन्, अरू केही पनि छैन।” येशूको वचनद्वारा पत्रुस अत्यन्तै बढी प्रोत्साहित भए, किनभने येशू क्रूसमा टाँगिनुभन्दा पहिले, उहाँले पत्रुसलाई भन्‍नुभएको थियो: “म यस संसारको होइन, र तँ पनि यस संसारको होइनस्।” पछि, जब पत्रुस ठूलो पीडाको बिन्दुमा पुगे, तब येशूले तिनलाई स्मरण गराउनुभयो: “पत्रुस, के तैँले बिर्सिस्? म यो संसारको होइन, र मैले मेरो कामको लागि मात्रै पहिले प्रस्थान गरेँ। तँ पनि यो संसारको होइनस्, तैँले साँच्‍चै बिर्सिस्? मैले तँलाई दुई पटक भनेको छु, के तँलाई याद छैन?” यो सुनेर, पत्रुसले भने: “मैले बिर्सेको छैन!” त्यसपछि येशूले भन्‍नुभयो: “एक पटक तैँले स्वर्गमा मसँग एकसाथ खुशीको समय बिताइस् र मसँगै केही समय बसिस्। तँ मेरो सम्झना गर्छस्, र म तेरो सम्झना गर्छु। मेरो नजरमा सृष्टि गरिएका वस्तुहरूलाई उल्‍लेख गर्न योग्य नभए तापनि, निर्दोष र प्रेमिलोलाई म प्रेम नगरी कसरी बस्न सक्छु र? के तैँले मेरो प्रतिज्ञालाई बिर्सेको छस्? तैँले पृथ्वीमा मेरो आज्ञालाई स्वीकार गर्नैपर्छ; मैले तँलाई सुम्पेको कार्यलाई तैँले पूरा गर्नैपर्छ। एक दिन म तँलाई अवश्य नै मेरो नजिक बस्‍नको लागि डोर्याउनेछु।” यो सुनेपछि, पत्रुस अझै बढी उत्साही बने र तिनले अझै ठूलो उत्प्रेरणा प्राप्त गरे, यतिसम्म कि क्रूसमा हुँदा तिनले भन्‍न सके: “परमेश्‍वर! म तपाईंलाई पर्याप्त प्रेम गर्न सक्दिन। तपाईंले मलाई मर्न लगाउनुभयो भने पनि, म तपाईंलाई अझै पर्याप्त प्रेम गर्न सक्दिन। तपाईंले मेरो प्राणलाई जहाँ पठाउनुभए तापनि, तपाईंले तपाईंका विगतका प्रतिज्ञाहरूलाई पूरा गर्नुभए पनि वा नगर्नुभए पनि, त्यसपछि तपाईंले जे गर्नुभए पनि, म तपाईंलाई प्रेम गर्छु र तपाईंमा विश्‍वास गर्छु।” तिनी जे कुरामा अटल रहे त्यो तिनको विश्‍वास, र साँचो प्रेम थियो।
अर्को: परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू सदाको लागि उहाँको ज्योतिभित्र जिउनेछन्‌